WhatsApp waxay kuu ogolaanaysaa inaad ka baxdo kooxaha adigoon ogaysiin inta kale ee isticmaala | IPhone News
Angel Gonzalez | 17/05/2022 17:00 | Barnaamijyada IPhone, Noticias
Maalmo ka hor waxaan ogaanay in WhatsApp uu ku dhex milmay nooca beta ee codsigiisa filtarrada raadinta. Tani waxay noo ogolaatay inaan si sahlan u helno waxa aan raadineyno iyada oo loo marayo qiyaaso taxane ah. Shaqada cusub ee lagu soo bandhigay beta ee WhatsApp ee desktop-ka waa Suurtagalnimada inaad uga tagto kooxaha WhatsApp-ka adigoon ogaysiin dhammaan isticmaaleyaasha, maamulayaasha kaliya. Imaanshiyaha Bulshooyinka iyo kooxaha ilaa 256 qof, waa qiyaas wanaagsan in laga fogaado in la ogeysiiyo dhammaan kooxda tagitaanka isticmaale.
Waan ka bixi karnaa kooxaha WhatsApp-ka iyada oo aan cidina ogaan
Kooxaha WhatsApp-ku waxay jireen muddo dheer. Arrinka maanta na quseeyana. Marka isticmaaluhu uu go'aansado inuu ka tago koox, Isticmaalayaasha oo dhan waxay arkaan fariin uga digaysa bixitaankooda. Dhab ahaantii, waxay qaadataa kala badh booska fariinta caadiga ah waxayna ku fadhidaa bartamaha shaashadda. Si kastaba ha ahaatee, tani way isbedeli kartaa dhawaan.
Kooxda WABetaInfo wuxuu helay isbeddel cusub oo la xidhiidha ka-tagidda kooxaha dhexdooda. Shaqadan cusub ayaa ka soo muuqatay beta-ka WhatsApp Desktop-ka laakiin waxa ay iman doontaa iOS iyo Android iyada oo aan shaki ku jirin haddii adeegga fariimaha uu siiyo iftiinka cagaaran ee isbeddelka.
Isbeddelkan ka dhigaya wax soo saarka kooxda WhatsApp mid aan la arki karin isticmaalayaasha kale. Iyadoo a marka laga reebo. Dhammaan bixitaannada waxaa la ogeysiin doonaa maamulayaasha kooxda. Tani waxay noqon kartaa mid la jaanqaadi karta, sidaan soo sheegnay, oo ah imaatinka Jaaliyadaha bilaha soo socda, goobo taxane ah oo kooxuhu ay noqon doonaan xudunta dareenka. Xaqiiqaduna waxay tahay in bixitaannada isticmaalayaashu aysan qaban dareenka kooxaha sida ay hadda sameeyaan marka qof ka tago.
Waan arki doonaa haddii WhatsApp ugu dambeyntii go'aansato inuu isbeddelkan ku dabaqo kaabayaashiisa oo dhan. Haddii ay dhacdo in sidaas la sameeyo, labadaba iOS, Android, nooca shabakadda iyo nooca desktop-ka waa la cusboonaysiin doonaa iyadoo laga fogaanayo fariimaha dhibta leh ee kooxuhu ka tageen isticmaalayaashu.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » WhatsApp waxay kuu ogolaan doontaa inaad ka baxdo kooxaha adoon ogeysiin isticmaalayaasha kale